Tambazotra mpangalatra Sprinter : Telo nadoboka am-ponja, telo nahazo fahafahana vonjimaika -
AccueilRaharaham-pirenenaTambazotra mpangalatra Sprinter : Telo nadoboka am-ponja, telo nahazo fahafahana vonjimaika
23/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora avy hatrany ireo telolahy mpangalatra fiara Sprinter taorian’ny niakaran’ny raharaha teo anatrehan’ny fampanoavana omaly. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny telo ambiny, izay nahitana ny iray tamin’ireo jiolahy sy ireo olona roa nividy ireo fiara halatra. Raharaha halatra fiara sprinter miisa roa izay niseho tamin’ny fotoana samihafa no indray nahavoarohirohy ireto andian-jiolahy ireto. Ny voalohany dia niseho ny 26 septambra 2013, teny Ambolokandrina, raha toa ka vao tamin’ny volana jona tamin’ity taona ity no nisy nangalatra teny Ampasampito ilay fiara fanindroany. Samy namidy, ary hita tamin’ny olona samihafa tany Morarano Chrome, distrikan’Amparafaravola avokoa moa ireo fiara sprinter ireo, ny 17 novambra lasa teo. Raha ny nambaran’ny kolonely Randriamanantena Pascal, lehiben’ny sampam-pikarohana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena etsy Fiadanana, dia nitovy avokoa ny paikady nanjonoan’ireo tambazotra ireo ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ireto fiara sprinter, izay ao amin’ny zotra 113 sy zotra mandeha Antsirabe-Ambatolampy ireto.” Mody nofitahina tamin’ny alalan’ny fitondrana “special” mariazy ny saofera tamin’izany. Rehefa tonga teny amin’ny toerana nifanomezana, dia mody nolazaina fa mbola misy olon-kafa andrasana, ka nasaina nisakafo sy nisotro ranom-boankazo izay nandrarahana fanafody fampatoriana izy ireo”, hoy ihany ny fanazavan’ity tompon’andraikitra ity.
Rehefa rendrika tao anaty torimaso lalina noho izany ireo niharan-doza, dia nentin’ireo tsy mataho-tody nitsoaka ny fiara. “Nariana tany Ambohimanambola ny saofera sy ny resevera, ary efa alina be izy ireo vao nahatsiaro tena, izay mbola hita nitsirepirepy sy nandoa rà”, hoy kosa ny fanampim-panazavan’ny tompon’ilay fiara very tamin’ny 2013. Raha ny nambaran’ny kolonely Randrimanantena hatrany moa, dia mbola tohin’ilay raharaha halatra sprinter tamin’ny volana oktobra lasa teo ihany ity niseho tamin’ny taona 2013 sy volana jona 2017 ity. Nampisalasala, ary sarotra no nanenjehana ireo olona nividy ireo fiara sprinter ireo, izay nilaza ho tsy nahafantatra izany ho fiara halatra hatrany am-boalohany, ka izay no antony mety nanomezana azy ireo fahafahana vonjimaika.” Efa nofafana sy novaina ny nomerao, ary efa voadio tamin’ny alalan’ny taratasy ara-dalàna ireo fiara roa ireo. Nizotra tamin’ ny dingana rehetra tokony narahana noho izany ny famarotana”, hoy ihany ny voalazan’ ity lehiben’ny sampam-pikarohana eo anivon’ny zandarimaria ity. Na izany aza anefa dia mbola mitohy ihany ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha maloto ity izay mety hihitatra hatrany amin’ny “centre d’immatriculation” any Toamasina sy any Toliara mihitsy. Raha ny voalaza ihany koa dia mbola misy vehivavy iray hafa karohina amin’izao fotoana izao, izay niray petsapetsa tamin’ireo olon-dratsy ireo.
strictlady.net dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
Ravalomanana Marc : Mitady hialokaloka ambadiky ny Fampihavanana
Mazava, ary nahitsy ny nambaran’ ny filohan’ ny antenimieran-doholona mahakasika ny lafin’ny fampihavanana raha nihaona tamin’ny filohan’ ny CFM Maka Alphonse sy ireo mambran’ ny fampihavanana ny tenany omaly tetsy Anosy, mazava tokoa mantsy ny ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina Hery : Nandray ny filoha lefitra iraisam-pirenena ny Lions Club
Ireo manodidina an-dRajoelina : Mpanao hosoka sy vola maloto
Hery Rajaonarimampianina : “Fifidianana mangarahara no atao”
Hery Rajaonarimampianina : « Fototry ny filaminana ny fifandimbiasam-pahefana »